Omume ka gịrịgịrị ụkwụ - Nzọụkwụ, ndụmọdụ na ndị ọzọ | Bezzia
Omume ka gịrịgịrị ụkwụ
Susana godoy | 10/06/2021 14:00 | Mmega ahụ
Chọrọ ịma ihe omume kachasị mma iji mpee ụkwụ gị? Taa ị ga - ahapụ obi abụọ n'ihi na ọ bụ otu n'ime nhọrọ ndị ọtụtụ na - achọ ọtụtụ. Ọ naghị adị mfe mgbe niile igbutu akụkụ ahụ anyị nke doro anya na n'ihi nke ahụ, anyị na-enwekarị obi nkoropụ.
Ya mere, ọ kacha mma ịme a Nchikota nke mmega ahu di nkpa, ndi ozo ndi ozo na ihe ndia nile gbara ya ezigbo nri ebe enwere. Naanị mgbe ahụ ka anyị nwere ike mezuo ihe niile anyị bidoro. N'ezie, ị ga-enwerịrị obere ndidi na nkwụsi ike. Anyị ebido ịlụ ọgụ maka ebum n’uche anyị?
1 Etu Ọ Ga-esi Wepụ Abụba Legkwụ Ọsọ
2 Ihe ịkwụsị iri nri ka gị ebughibu
3 Omume ka gịrịgịrị ụkwụ na apata ụkwụ
3.3 Nzọụkwụ na ala
4 Mmega ahụ iji dị gịrịgịrị ma wepụ cellulite
5 Usoro na omume iji mebie apata ụkwụ gị
Etu Ọ Ga-esi Wepụ Abụba Legkwụ Ọsọ
Ọ bụ ezie na anyị chọrọ, anyị ekwuola na anyị enweghị ike ị tufue abụba n'akụkụ ọ bụla nke ahụ ngwa ngwa. Mana obu eziokwu na anyi puru ichota uzo di nkpirisi. Nke mbu bu iche echiche banyere nri di nma ma obu ibi ndu. Anyị ekwesịghị agụụ Ọ dịkarịrị obere, mana anyị na-ebelata kalori anyị na-eri, na-ahọrọ karịa inine na protein, debe carbohydrates mana were nri eghe na achịcha dị iche iche pụọ na ndụ anyị ruo nwa oge.
N'aka nke ọzọ, enwere akụkụ mmega ahụ nke emechara site na nri. N'okwu a, ị nwere ike ịmalite site na ịbanye n'ime na-eme ọzụzụ dị ka ihe omume obi. Kedu ndị? Ọ dị mma, jee ije jee ije nwayọ, na-agba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ na-agbagharị na n'ezie, ịrị elu ma ọ bụ mgbago steepụ na-agụkwa dị ka ndị dị otú ahụ. Ha niile bụ ihe omume ebe obi na-agba ọsọ site na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji mbụ, nke ga-enye nsonaazụ ka mma mgbe ọ na-abịa ịsị abụ ọma. Ma tupu oge, n’oge na mgbe ọ gasịrị, cheta ị toụ nnukwu mmiri ma ọ bụ mkpịsị ahịhịa ndụ ma hapụ ị drinksụ mmanya na-atọ ụtọ. Eruworị ụzọ mbụ ị ga-esi nweta ihe mgbaru ọsọ ahụ achọrọ!
Ihe ịkwụsị iri nri ka gị ebughibu
Ọ bụ ajụjụ ugboro ugboro mgbe ị na-ekwu maka ifelata na ụkwụ ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ nke ahụ. Ma eziokwu bụ na anyị kwesịrị iri nri, mana ahụike na iche iche. Ọ bụ eziokwu na otu ugboro n'izu, anyị nwere ike ime onwe anyị obi ụtọ, mana ọ bụrụ na anyị ebigide ndụ ibi ndụ dabere na iri nri dị mma, anyị ga-emezu ebumnuche ahụ karịa ka anyị tụrụ anya ya.
Anyị kwesịrị ịsị mma, ma ọ bụ goodbye, niile nri esiri esi, eghe ma ọ bụ achịcha dị iche iche.
N'otu aka ahụ, na-a drinksụkwa mmanya na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ihe ọicesụagedụ juru.
Anyị ga-a moreụkwu infusions ma ọ bụ kọfị mana were mmiri ara ehi ewepụrụ abụba, yana yogurts nwekwara shuga.
Banyere anụ, ọ bụ eziokwu na oge ole na ole n'izu ị nwere ike ịnwe ihe ọ bụla masịrị gị. Ma imirikiti oge anyi kwesiri ilekwasi anya na anu ocha dika oku okuko ma obu toki.
Azụ, tuna na ụdị nri mmiri ga-esokwa n’ihe oriri ọhụrụ anyị.
N'ezie, a ghaghị ijikọ protein niile na akwụkwọ nri. N'ezie, ndị a ga-ekpuchi ọkara nke efere gị. N’akụkụ nke ọzọ, otu akụkụ ga-abụ nke protein na nke ọzọ maka carbohydrates dị ka achịcha ọka wit dum ma ọ bụ pasta.
Gụnyere mkpụrụ osisi maka oge nri yana kwa onyinye vitamin nke ichoro.
Omume ka gịrịgịrị ụkwụ na apata ụkwụ
Kedu ihe mgbatị kacha mma iji slim ụkwụ gị? Ọ bụ ajụjụ na-agbaghara anyị mgbe niile na ugbu a, anyị nwere azịza ya. Mana ọ bụghị naanị otu, mana anyị ga-ahụ ọtụtụ ha niile dị ọfụma, yabụ, anyị ga-anwale ha n'ahụ anyị.
Tupu ịmalite mgbe ọ bụla mmega ahụỌ bụ ihe amamihe dị na ya iji kpoo ọkụ tupu oge eruo iji zere mmerụ ahụ na-esote. Nke ahụ kwuru, mgbe anyị na-aza ajụjụ nke mmega ahụ kachasị mma na ụkwụ dị mkpụmkpụ, anyị na squats nọrọ n'ọnọdụ mbụ. Anyị nwere ọtụtụ nsụgharị, na ma ọ bụ na-enweghị ibu ibu, na a mmanya, sumo, isometric, wdg. Mana ekwesịrị ikwu na ha niile ga-ezu oke oke iji merie ihe na-ewetara anyị ebe a taa. Ihe ọzọ bụ na ị nwere ike ịmepụta usoro iji ọtụtụ ụdị mee ka ọzụzụ gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Cheta izu ike maka ihe dịka 20 sekọnd n'etiti ngọngọ ọ bụla.
N'okwu a, strides ga - enyere anyị aka ifelata ma na - egbukwa ụkwụ niile. Ya mere, ọ ga-adịrịrị na mmemme anyị kwa ụbọchị. Na-ebili ọtọ, na obere nkewa n'etiti ha wee were otu ụkwụ gị laghachite azụ, ebe nke ọzọ ka na-agbanwe agbanwe. Ma cheta na ikpere ekwesịghị ịgafe akụkụ ụkwụ n'ihi na mgbe ahụ anyị nwere ike inwe ụdị mmerụ ahụ. Akpa ume nwere ike ịdị na-awụli elu, na mpụta, na-agba n'ihu ma ọ bụ na-ebuli azụ, wdg. Kedu ihe na - eme ka anyị nweghachi nhọrọ iji mepụta usoro ọzụzụ anyị zuru oke. Nwere ike ikpokọta squat na n'ime ya, were a lunge.
Nzọụkwụ na ala
Nzọụkwụ, bench ma ọ bụ nzọụkwụ ga-abụ ntọala nke mmega ahụ dị ka nke a. N'ihi na ọ na-enyekwa anyị ohere ịga n'ihu na-enye ụkwụ anyị ọtụtụ mmegharị, nke chọrọ ya nke ukwuu. Ọzọkwa anyị na-etinye aka n'úkwù, quads ma ọ bụ ụmụ ehi na mmega dị ka nke a. Anyị na-amalite iguzo tupu nzọụkwụ anyị, mana ọ bụrụ na ịhọrọ oche ma ọ bụ drawer, o kwesịrị ịdị elu karịa ikpere. Anyị na-etinye otu ụkwụ na ya, na-agbago ma jiri ụkwụ nke ọzọ na-agbago onwe anyị. Ihe ọ bụla họọrọ dị elu, gbalịa mgbe niile ịghara ịkpụ ahụ ahụ, mana ka ịdebe azụ azụ, na-eme ka ike dị na ụkwụ anyị. Nwere ike ụkwụ ọzọ maka imezi nke ọma.
Ọ bụ mmega ahụ zuru oke, ya mere ọ ga-abụ na ọzụzụ anyị. Nwere ike ịmalite ma squat na squat. Mgbe ahụ, ịtụkwasị aka gị n'ala, ị ga-atụghachi ụkwụ gị, jiri obere ịkwa aka. Mgbe ahụ anyị ga-ebili na ee anyị ga-awụli elu n'ụkwụ anyị, ịlaghachi n'ala iji malite usoro ahụ. Ọ bụrụ na emere n'ụzọ aghịrị, anyị ga-enweta ezigbo nsonaazụ n'ihi na ọ ga-emekwa ka obi mmadụ gbaa ọtụtụ. N'ezie, ị kwesịrị ịdị na-agbanwe ike na mbọ gị oge niile.
Mmega ahụ iji dị gịrịgịrị ma wepụ cellulite
Nsogbu ọzọ na-echegbu anyị bụ cellulite. Otu n'ime ihe mgbochi ndị a na - agaghị emeri mgbe niile, yabụ anyị ga - eme ọtụtụ akụkụ n'akụkụ anyị. Na mgbakwunye na ndụmọdụ niile gara aga, a ga-agbakwunye nuances ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, na ngalaba nri, ọ bụ eziokwu na mkpụrụ osisi ahụ dịkwa ugbu a ma na nke a, anyị ga-nzọkwu na strawberries, anyụ ma ọ bụ banana n'ihi na ha nwere antioxidants ma gbochie anyị ijigide oke mmiri, nke bụ otu n'ime ntọala nke cellulite ahụ asị kpọrọ.
N'etiti mmega ahụ iji dị gịrịgịrị ụkwụ ma wepụ cellulite, a hapụrụ anyị ndị chọrọ obere ike. Ihe kachasị mma maka nke a bụ ịkụ nzọ n'agbụ na-agbanwe agbanwe, nke na-enyere aka mgbe niile ụda ụda akụkụ ọ bụla na-arụ ọrụ. Yabụ ebe a ọ dị ezigbo mkpa. Echefula ma ngụgụ ma squats ndị na-enweghị ike ịnọ na nke a. Ma cheta na na nke a, ị nwekwara ike inyere onwe gị aka na ibu arọ, ịnụ ụtọ nsonaazụ kacha mma. Otu ihe ahụ ịrịgo na ịrị elu steepụ, ebe ị nwekwara ike iburu ibu na nkwonkwo ụkwụ gị. Nke a ga - enyere aka ịkwụsị sagging ma gosipụta ụfọdụ ụkwụ na - egbu egbu ngwa ngwa karịa ka ị tụrụ anya.
Usoro na omume iji mebie apata ụkwụ gị
N'ime aghụghọ ndị fọdụrụnụ ịkọwa, anyị hapụrụ nke ahụ ị kwesịrị ị na-amụba protein gị oriri. N'ihi na mgbakwunye na ịbụ nke na-eju afọ ma na-enyere anyị aka ịba ụba oke ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enweghị ike ịhapụ kọfị n'ụtụtụ, wee drinkụọ ya na-erughị oke mana echefula ya. Na mgbakwunye, ị nwere ike soro ya oge niile soro mmiri ara ehi skim. Maraworị na ọ bụ ihe ọ drinkụ drinkụ na-eme ka metabolism dị ngwa ka anyị wee chọọ ya na ndụ anyị. A na-etinye nnu n'otu akụkụ, dị ka ị nwere ike icheworị, ọ kachasị mma ịgbakwunye ngwa nri dị ka galik, oregano ma ọ bụ ihe ọ bụla masịrị gị. Ga - enweta ekpomeekpo mana na - enweghị mmiri ọ bụla.
Iyọta gị apata nwere ike nzọ na ndị ọzọ omume ndị dị otú ahụ dị ka akwa n'elu ubu. Nke ahụ bụ, ị ga-edina n ’azụ gị na ụkwụ gị hulatara nwayọ nwayọ, ị na-eku ume ma bulie ahụ gị elu mana emela ya na ngọngọ. Les ga-anagide nkwonkwo ụkwụ na akụkụ ubu. Omume a nwere ike ịdị iche site na ịwelite aka gị ma ọ bụ tinye ụkwụ gị na tiptoe. Ọ bụ otu n'ime ọnọdụ ndị a na-arụkarị na Pilates na ịdọ aka ná ntị a ga-enyere anyị aka ịkwado ya na omume ahụ. iji mezuo ebumnuche anyị.
Raisekwụ ụkwụ bụ ihe ọzọ dị mkpa. Gha ọzọ, chee ihu, anyị ga-eweli otu ụkwụ wee gbadata ya nwayọ nwayọ n’emetụghị ala aka mgbe anyị ga-eweli nke ọzọ. Na mgbakwunye na imega ahụ, anyị ga-emekwa otu ihe ahụ na afọ. Ya mere, anyị ejirila otu nkume gbue nnụnụ abụọ! Nke nta nke nta ma na-agbaso ndụmọdụ niile, ị ga-ahụrịrị ọdịiche ahụ. Gwa anyị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Omume ka gịrịgịrị ụkwụ
Aghụghọ na-eto eto ntutu
6 mpụ akwụkwọ na-abịa nko gị